သင့်ရဲ့ Blog ကို Compendium ဖြင့်ဘယ်လိုပို့ရမလဲ
Video: Compendium: BCC မင်းရဲ့ Blog လား။
သောကြာနေ့, ဧပြီ 15, 2011 စနေနေ့, ဇန်နဝါရီလ 23, 2021 Douglas Karr
ငါတို့နောက် Martech Zone ဗီဒီယိုကငါသိပြီးချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ရှေးရှေးတွေနဲ့အတူ အကျဉ်းချုပ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တွင်လည်းပါဝင်သောအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ထုတ်ဝေရေးကုမ္ပဏီတွင်လည်းရှယ်ယာရှိသည်။
ငါ၌အစုရှယ်ယာများပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းကြောင့်သူတို့ကိုငါမပြောချင်ဘူး လွန်း အများကြီး, ဒါပေမယ့်မကြာသေးမီကသူတို့ကယ့်ကိုအကြီးအအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေခဲ့ကြရတယ်။ ဤတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာကုမ္ပဏီများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုစီးရီးအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။
ခရစ်နှင့် Compendium ရဲ့ဆောင်ပုဒ် နေရာတိုင်း၊ ဘယ်နေရာကိုမဆို၊ အစက်အပြောက် သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူကိုယ်စားလှယ်ကအီးမေးလ်ကိုတုန့်ပြန်နိုင်သည့်စနစ်တစ်ခုကိုတီထွင်ခြင်းနှင့်ထိုအတည်ပြုချက်ကိုအတည်ပြုချက်နှင့်အယ်ဒီတာလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းပြီးနောက်ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်ထိုအီးမေးလ်ကို အသုံးပြု၍ ရနိုင်သည်။ Max သည်မှန်ကန်သည် - ကုမ္ပဏီများသည်နေ့စဉ်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာသောအရာများကိုနေ့စဉ်ထုတ်လုပ်နေပြီး၎င်းကိုအသုံးချခြင်းမဟုတ်ပါ။
Compendium သည်ဤလမ်းကိုဆက်လက်တီထွင်နေပြီးအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုအကြီးမားဆုံးသောအဖွဲ့အစည်းများအားပံ့ပိုးပေးနေသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ခက်ခဲသောပြtoနာအတွက်ရိုးရှင်းသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Compendium ၏ဥက္ကPresident္ဌအသစ် Frank Dale အားဂုဏ်ပြုပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကဖရန့်ခ်ျနှင့်အချိန်အနည်းငယ်ကုန်လွန်ပြီးနောက်သူသည်စက်မှုလုပ်ငန်းများမည်သည့်နေရာတွင်ရောက်ရှိနေသည်၊ နေရာမရွေး၊ နေရာတိုင်းမှအကြောင်းအရာများကိုမြှင့်တင်ရန်ကုမ္ပဏီများ၏လိုအပ်ချက်များအပေါ်သူ၏လက်ညှိုးထိုးသည်။
မှာအဖွဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 12 ကြယ်မီဒီယာ အခြားအကြီးအထုတ်လုပ်မှုများအတွက်! သင်ဟာဝေးလံခေါင်သီတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုစီးရီးကိုအာရုံစိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် - ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် (အလွန်ဈေးသက်သာ) ကိုဖုံးအုပ်ပြီးသင်နှင့်အတူကြီးကျယ်သောအရာများကိုအတူတကွထားပါကကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဝေမည်!
ဗီဒီယို - ပြProbleနာများကိုဖြေရှင်းခြင်းဖြင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုရရှိသည်
ဧပြီ 18, 2011 မှာ 6: 34 pm တွင်
အချို့သောနည်းပညာဆိုင်ရာမှတ်ချက်များမျှသာ - စပီကာကိုကင်မရာဖြင့် ၀ င်ရိုးပေါ်တွင်ပြောဆိုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီဗီဒီယိုမှာဒုတိယကင်မရာထောင့်ကလုံးဝပိတ်သွားပြီးစပီကာရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုသာပြသသည်။ အကောင်းဆုံးကတော့ကင်မရာတစ်လုံးသည်အင်တာဗျူးသူ၏ပခုံးထက်တွင်သာရှိသင့်ပြီးအလယ်အလတ်မှရိုက်ကူးမည့်အဓိကရိုက်ချက်ကိုရိုက်ကူးသင့်သည်။ အဓိကရိုက်ချက်ကတော့အဆင်မပြေသော်လည်းကောင်းပါတယ်။ ပရိုဖိုင်းမှာပါသူနှစ် ဦး စလုံးကိုပြသတဲ့အတွက် cutaway အဖြစ်သာအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါကင်မရာကိုအင်တာဗျူးသူဆီ ဦး တည်သွားစေပြီးအင်တာဗျူးသူကိုပိုနှစ်သက်တယ်။ အင်တာဗျူးသူဟာကင်မရာကိုလှည့်ပြီးအဖွင့်အပိတ်မှာအဆင်ပြေပါတယ်။
ဧပြီ 18, 2011 မှာ 8: 34 pm တွင်
gnurx, သင်၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်ချက်များသည်ကြီးလှ၏။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ ၀ င်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုများ၏အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်တုံ့ပြန်ချက်များကိုတန်ဖိုးထားရန်အမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်နေသည်။ နောက်ဗီဒီယိုမီးမောင်းထိုးရန်နောက်လတွင်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံပူးပေါင်းရန်မျှော်လင့်ပါ။